Madaxwerynaha Puntland Oo La Caleema Saaray “Si Wanaagsan Ayaan Ula Shaqey Doonaa Dowladda Federalka Ah” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Garowe – Mareeg.com: Madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Puntland ayaa xalay lagu caleema saaray magaalada Garoowe ee Xarunta Puntland, kadib munaasabad maalmihii ugu dambeeyey la qabanqaabinayey oo xalay si rasmi ah uga dhacday Madaxtooyada Garoowe.
Xafladda caleema saarka madaxda Puntland oo xalay saqdii dhexe lagu soo gabagabeeyey madaxtooyada Garoowe ayaa waxaa kasoo qeyb galay wafuud kala duwan oo ka socday maamullada dalka ka jira dawladda federaalka ah ee Soomaaliya, wadamada deriskalaah Soomaaliya, Qaramada Midoobay iyo wakiillo caalami ah.
Sidoo kale waxaa kasoo qeyb galay hogaamiyaashii hore ee Puntland oo uu ka mid ahaa C/raxmaan Faroowe, waxaa kale oo xafladdaas kasoo qeyb galay kumannaan dadweyne ah oo dadka iyo dibadda isaga kalayimid.
Madaxweynayaashii hore ee Puntland Gen.Cadde Muuse Xirsi, Isimada Puntland, Culimada iyo qaybaha kal duwan ee bulshada ayaa iyaguna ka soo qaybgalay xafladda caleema saarka.
Sidoo kale, waxaa caleema saarka ka qeyb galay wakiilo kala socsay dowladda Itoobiya iyo Jabuuti iyo siyaasiyiin Soomaali ah oo uu ka mid yahay Dr. C/raxmaan Macallin C/llaahi “Baadiyow”.
Madaxweynihii hore ee Puntland C/raxmaan shiikh Maxamed Maxamuud Faroole oo khudbad ka jeediyey munaasabadda ayaa ayaa farxad ka muujiyey caleema saarka madaxweynaha uu dhawaan xilka ku wareejiyey Prof. C/weli Maxamed Cali Gaas.
Siyaasiyiintii munaasabadda ka khudbeeyey waxaa ka mid ahaa Ra’iisulwasaarihii hore ee Soomaaliya Cali maxamed Geeddii oo munaasabaddii caleema saarka madaxweyne Gaas ku tilmaamay mid taariikhi ah oo ka qeyb qaadanaysa midnimada umadda Soomaaliyeed, isagoo tusaale usoo qaattay martida kasoo qeyb gashay oo isaga kala yimid dhammaan gobollada Dalka.
Madaxweynayaasha maamullada Galmudug, Ximan iyo Ximan iyo Jubba oo iyaguna munaasabaddaas khudbado kasoo jeediyey ayaa soo dhaweeyey is bedelkii iyo doorashooyinkii dhawaan ka qabsoomay Puntland, iyagoo sheegay in ay Puntland kaga dayandoonaa tallaabooyinka wanaagsan.
Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Amb. Nicklas Kay oo isna khudbad ka jeediyay xafladda ayaa si aad ah u bogaadiyey isbedelka ka dhacay Puntland, wuxuuna sheegay in uu aad ula dhacay sida maamulkii hore uu u wareejiyey xilka.
Madaxweynaha cusub ee Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas oo xalay lagu caleema saaray magaalada Garowe, kadib munaasabad ballaaran oo ay ka qeyb galeen madax kala duwan ayaa soo hadal qaaday wada shaqeynta dowladda federaalka Soomaaliya oo maamulkii isaga ka horeeyay xiriirka u jareen.
C/wali Gaas ayaa sheegay in sababaha Puntland loo aas aasay ay qeyb weyn ka aheyd in midnimada Soomaaliya la xoojiyo, isagoo xusay in wada shaqeyn ay la yeeshaan dowladda Federaalka ay ku xiran tahay in si wanaagsan loogu dhaqmo dastuurka dalka u yaala.
“Puntland waxay tusaale u tahay midnimada Soomaaliya, dowladda Federaalka uu hogaamiyo Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan kula shaqeyn doonaa in si wanaagsan loogu dhaqmo dastuurka, anaga waxaa balan qaadeynaa inaan la shaqeyn doono”ayuu yiri C/wali Gaas.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in Puntland diyaar u tahay afti loo qaado dastuurka KMG, waxaana uu rajo ka muujiyay xiriir wanaagsan dhex mara Puntland iyo dowladda Federaalka Soomaaliya.
“Wada shaqeynta dowladda Federaalka iyo Puntland waxay asal u ahaan doontaa ku dhaqanka dastuurka”ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa 8-dii bishaan Janaayo 2014 loo doortay inuu noqdo madaxweynaha maamulkaas isagoo ka fuuleystay mnadaxweynihii hore C/raxmaan Faroole oo 5 sano hogaaminayey Puntland.